पवित्र आत्माको काम अघि बढ्ने क्रममा, परमेश्‍वरले हामीलाई एकपल्ट फेरि एउटा नयाँ मार्गमा प्रवेश गराउनुभएको छ जसमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। परिणामस्वरूप, केही मानिसहरूले अपरिहार्य रूपमा नै मलाई गलत बुझेका छन् र मलाई गुनासोहरू पोखेका छन्। केहीले मलाई विरोध र प्रतिरोध गरेका छन्, अनि मलाई छानबिन गरेका छन्। तैपनि, तिमीहरूले पश्‍चाताप गर र आफैलाई सुधार गर भनेर म अझै कृपापूर्वक पर्खन्छु। पवित्र आत्माको कामको विधिमा आएको परिवर्तन यो हो कि परमेश्‍वर स्वयम्‌ खुल्लमखुल्ला प्रकट हुनुभएको छ। मेरो वचन अपरिवर्तित रहनेछ! मैले मुक्ति दिने व्यक्ति तँ नै भएकोले, म तँलाई आधि बाटोमै छोड्ने इच्छा बिलकुल गर्दिनँ। यति मात्र हो कि तिमीहरू शङ्काहरू पाल्छौ अनि खालि हात पछाडि फर्कन चाहन्छौ। तिमीहरूमध्ये कति त अघि बढ्नै छोडेका छौ, जब कि अरू केवल पर्खिरहेका र हेरिरहेका छन्। अझ अरू निष्क्रिय भएर परिस्थितिको निराकरण गरिरहेका छन्, जब कि कति चाहिँ केवल काम गरेजस्तो मात्र गरिरहेका छन्। तिमीहरूले आफ्‍नो हृदय साँच्‍चै कठोर पारेका छौ! मैले तिमीहरूलाई भनेको कुरालाई तैँले लिएको छस् अनि त्यसलाई तैँले घमन्ड गर्ने वा शेखी गर्ने कुरामा परिवर्तन गरेको छस्। यस कुरालाई अझै चिन्तन गर्: यो तिमीहरू माथि आउँदै गरेको कृपा र न्यायका वचनहरू बाहेक अरू केही होइन। तिमीहरू वास्तवमै विद्रोही भएका देखेर पवित्र आत्माले प्रत्यक्ष रूपले बोल्ने र चिरफार गर्ने काम सुरु गर्नुहुन्छ। तिमीहरू डराउनुपर्छ। अन्धाधुन्ध काम नगर वा सोचविचारै नगरी केही नगर, अनि व्यर्थको, अहङ्कारी वा हठधर्मी नहोऊ! तैँले मेरा वचनहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ अनि जहाँ जान्छस्, त्यसअनुसार जीवन बिताउनुपर्छ, ताकि त्यसले तँलाई साँच्चिकै भित्रबाटै परिवर्तन गर्न सकोस् अनि तँसित मेरो स्वभाव होस्। त्यस्ता प्रकारका परिणामहरू मात्र साँचो हुन्छन्।
मण्डली निर्माण हुनको लागि, तिमीहरू एउटा निश्‍चित कदको हुनैपर्छ र तिमीहरूले पूर्ण हृदयले र लगातार खोजी गर्नैपर्छ। यसको अतिरिक्त, परिवर्तित मानिस हुनको निम्ति तिमीहरूले पवित्र आत्माको ज्वलन र शोधनलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। केवल त्यस्ता परिस्थितिहरूमा मात्रै मण्डली निर्माण हुनसक्छ। पवित्र आत्माको कामले अहिले तिमीहरूलाई मण्डलीको निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ गर्न डोर्‍याएको छ। यदि तिमीहरूले विगतमा गरे झैँ त्यही भ्रमित र सुस्त ढङ्गले व्यवहार गर्न जारी राख्छौ भने तिमीहरूको निम्ति कुनै आशा हुँदैन। तिमीहरूले आफूलाई सबै सत्यताले सुसज्जित गर्नुपर्छ, तिमीहरूसित आत्मिक भेदशक्ति हुनुपर्छ, अनि तिमीहरू मेरो बुद्धिअनुसार सिद्ध प्रकारले हिँड्नैपर्छ। मण्डली निर्माणको निम्ति तिमीहरू जीवनको आत्माभित्र हुनैपर्छ, अनि तिमीहरूले सतही किसिमले मात्र नक्कल गर्नुहुँदैन। तिमीहरूको जीवनमा हुनै वृद्धिको प्रक्रिया त्यही प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियामा तिमीहरू निर्माण हुन्छौ। तथापि, याद गर, वरदानहरूमाथि भर पर्नेहरू वा आत्मिक विषयहरू बुझ्न नसक्‍नेहरू वा वास्तविकताको कमी भएकाहरूलाई निर्माण गरिन सकिँदैन न त मसित सधैँ नजिक हुन र कुराकानी गर्न नसक्‍नेहरूलाई नै निर्माण गर्न सकिन्छ। आफ्नो मनलाई धारणाहरूले भर्ने मानिसहरू वा धर्मसिद्धान्तहरू अनुसार जिउनेहरूलाई निर्माण गर्न सकिँन, न त भावनाहरूले डोर्याइएकाहरूलाई नै निर्माण गर्न सकिन्छ। परमेश्‍वरले तँलाई जसरी व्यवहार गर्नुभए तापनि, तैँले आफूलाई पूर्ण रूपमा उहाँको अधीनतामा सुम्पिनुपर्छ; नत्रभने, तँलाई निर्माण गर्न सकिँदैन। आफ्नै अहमता, स्व-धार्मिकता, घमन्ड अनि सन्तुष्टिमा मग्न रहनेहरू, अनि जसले वरिष्ठता देखाउन र देखावटी काम गर्न मन पराउँछन्, तिनीहरूलाई निर्माण गर्न सकिँदैन। जसले अरूसित समन्वय गर्दै सेवा गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई पनि निर्माण गर्न सकिँदैन, अनि आत्मिक भेदशक्ति नभएकाहरू र जोसुकैले डोर्‍याए पनि अन्धो भएर पछ्याउनेहरूको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। त्यस्तै गरी, जो मेरा अभिप्रायहरू बुझ्न असफल हुन्छन् अनि जसले चल्तीमै नरहेको अवस्थामा जीवन जिउँछन्, तिनीहरूलाई पनि निर्माण गर्न सकिँदैन, न त नयाँ ज्योति पक्रन अति ढिलो गर्नेहरू अनि जोसित जगको रूपमा कुनै दर्शन हुँदैन, तिनीहरूलाई नै निर्माण गर्न सकिन्छ।
कुनै ढिलाइ नगरीकन मण्डलीलाई निर्माण गरिनुपर्छ; यो मेरो निम्ति अत्यावश्यक चासोको विषय हो। तिमीहरूले सकारात्मक कुरामाथि ध्यान केन्द्रित गरेर थालनी गर्नुपर्छ अनि आफैलाई आफ्नो पूरा शक्तिले अर्पण गरेर निर्माणको प्रवाहमा सम्मिलित हुनुपर्छ। अन्यथा, तँलाई इन्कार गरिनेछ। त्यागिनुपर्ने कुरालाई तिमीहरूले पूर्ण रूपले त्याग्नुपर्छ, अनि जुन कुरा खानु र पिउनुपर्छ, त्यसलाई उचित रूपले खानु र पिउनुपर्छ। तिमीहरू मेरो वचनको वास्तविकतालाई जिउनुपर्छ, अनि तिमीहरूले सतही र महत्त्वहीन कुराहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न छोड्नुपर्छ। आफैलाई यो कुरा सोध्: तैँले मेरो वचनलाई कति लिएको छस्? तँ यसमा कति जिउँछस्? तैँले स्पष्ट समझ कायम गर्नुपर्छ, अनि हतार गरेर कुनै कुरा गर्नदेखि परै रहनुपर्छ; नत्रभने, त्यस्तो व्यवहारले तँलाई जीवनमा वृद्धि हासिल गर्न सहायता गर्नेछैन, तर त्यसले वास्तवमा तेरो वृद्धिलाई हानि गर्नेछ। तैँले सत्यतालाई बुझ्नुपर्छ, यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने हो भनी जान्नुपर्छ, अनि मेरो वचनलाई साँचो रूपले तेरो जीवन बनाउनुपर्छ। यही नै कुरोको चुरो हो!
अहिले मण्डलीको निर्माणको काम महत्त्वपूर्ण क्षणमा पुगेकोले, शैतानले योजनाहरू रच्दैछ र यसलाई तहसनहस गर्न भएभरको बल लगाउँदैछ। तिमीहरू लापरवाह बन्‍नु हुँदैन तर सतर्कतासहित अघि बढ्नुपर्छ अनि आत्मिक भेदशक्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस्तो भेदशक्तिविना, तिमीहरूले ठूला नोक्सानीहरू भोग्नुपर्नेछ। यो मामुली विषय होइन; तिमीहरूले यसलाई ठूलो महत्त्वको विषय ठान्नुपर्छ। शैतानले पनि झूटा रूपहरू निर्माण गर्न अनि जालसाजी प्रचार गर्न सक्छ, तर यी कुराहरूको अन्तर्निहित गुण फरक छ। मानिसहरू कति मूर्ख र लापरवाह छन्, र तिनीहरूले भिन्नता देख्न सक्दैनन्। यसले तिनीहरूले सधैँ स्पष्ट समझ र निस्तब्धता कायम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई पनि देखाउँछ। तिमीहरूको हृदय कतै पनि भेट्टाउन सकिँदैन। सेवा एकातिर एउटा आदर हो भने अर्कोतिर, यो नोक्सानी पनि हुनसक्छ। यसले कि त आशिषहरू कि त दुर्भाग्यतिर डोर्‍याउन सक्दछ। मेरो उपस्थितिमा शान्त होऊ अनि मेरो वचनअनुसार जिऊ, अनि आत्मिक रूपले, तिमीहरूले वास्तवमै जागरूकता कायम राख्नेछौ र भेदशक्तिको अभ्यास गर्नेछौ। जब शैतान आइपुग्छ, तिमीहरूले तुरुन्तै आफैलाई त्यसको विरुद्धमा बचाउ गर्न सक्नेछौ र त्यसको आगमनलाई महसुस गर्न सक्नेछौ; तिमीहरूले आफ्नो आत्माभित्र साँच्चिकैको असहजता महसुस गर्नेछौ। प्रचलनहरू परिवर्तन भएसँगै शैतानको हालको काम पनि परिवर्तन हुन्छ। जब मानिसहरूले अन्योलता पूर्वक व्यवहार गर्छन् र तिनीहरूमा जागरूकताको कमी हुन्छ, तब तिनीहरू कैदमा नै रहनेछन्। तँ हर समय जागा रहनुपर्छ, अनि तैँले तेरा आँखाहरू सजग राख्नुपर्छ। तेरो आफ्नै फाइदाहरू र नोक्सानीहरूलाई लिएर लडाईं-झगडा नगर् वा तेरो आफ्नै फाइदाको खातिर हिसाबकिताब नगर्; त्यसको साटोमा, मेरो इच्छा पूरा गर्न खोज्।
वस्तुहरू एउटै जस्तो देखिन सक्छन् तर तिनीहरू गुणस्तरमा फरक हुन सक्छन्। यसकारण, तैँले व्यक्तिहरू र साथै आत्माहरूलाई पहिचान गर्नुपर्छ। तैँले भेदशक्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ र आत्मिक रूपमा स्पष्ट समझ कायम राख्नुपर्छ। जब शैतानको विष देखा पर्छ, तैँले त्यसलाई झट्टै चिन्न सक्नुपर्छ; त्यो परमेश्‍वरको न्यायको ज्योतिबाट उम्किन सक्दैन। तैँले आफ्नो आत्मामा पवित्र आत्माको आवाजलाई नजिकबाट सुन्ने कुरालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, अरूलाई अन्धो भएर नपछ्या वा जुन कुरा झूट हो, त्यसलाई साँचो हो भनी ठान्ने भुल नगर्। जोसुकैले अगुवाइ गरे पनि त्यत्तिकै नपछ्या, नत्रभने तैँले ठूला नोक्सानीहरू भोग्छस्। यसले तँलाई कस्तो अनुभूति गर्ने तुल्याउँछ? के तिमीहरूले यसका परिणामहरू अनुभव गरेका छौ? तैँले अन्धाधुन्ध सेवामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन वा त्यसभित्र तेरा आफ्ना विचारहरू घुसाउनु हुँदैन, नत्रभने म तँलाई प्रहार गरेर ढाल्नेछु। अझ खराब कुरा, यदि तैँले अधीनतामा बस्‍न इन्कार गरिस्, र तैँले इच्छा गरेअनुसार भन्न र गर्न जारी राखिस् भने, म तँलाई काटेर फ्याँकिदिनेछु! मण्डलीले दुःख गरेर धेरै मानिसहरू बटुल्न आवश्यक छैन; यसले परमेश्‍वरलाई इमान्दारितापूर्वक प्रेम गर्नेहरू र वास्तवमा मेरो वचनअनुसार जिउनेहरूलाई मात्र चाहन्छ। तँलाई आफ्नो वास्तविक अवस्थाको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। के कुनै गरिबले आफूलाई धनी ठान्छ भने त्यो आफैलाई धोकामा पार्नु होइन र? मण्डली निर्माण हुनको निम्ति, तैँले आत्मालाई पछ्याउनुपर्छ; अन्धा जस्तै भएर अघि नबढ्। बरु, आ-आफ्‍नो ठाउँमा बस, अनि तिमीहरूका आ-आफ्‍नै कार्यहरू पूरा गर। तिमीहरू आफ्‍नो भूमिकाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन; तिमीहरूले गर्नसक्ने जुनसुकै कार्य पूरा गर्न जतिसक्दो गर, अनि मेरो हृदय सन्तुष्ट हुनेछ। यो होइन कि तिमीहरू सबैले उही कार्य गर्नेछौ। बरु, तिमीहरूमध्ये हरेकले आ-आफ्नै भूमिका खेल्नुपर्छ, अनि मण्डलीमा अरूसितको सहकार्यमा आफ्नो सेवा समर्पण गर्नुपर्छ। तेरो सेवा यी दुईमध्ये कुनै दिशातिर पनि मोडिनु हुँदैन।